Jared Kushner ayaa la filaya inuu tago Bariga Dhexe si uu madaxda Carbeed ugu cadaadiyo ka soo… – Hagaag.com
Jared Kushner ayaa la filaya inuu tago Bariga Dhexe si uu madaxda Carbeed ugu cadaadiyo ka soo…
Wiilka uu sodogga u yahay Madaxweynaha Mareykanka isla markaasna ah lataliyihiisa, Jared Kushner, ayaa la qorsheeyay inuu gaaro waqti dambe Bariga Dhexe, si loogu cadaadiyo madax badan oo Carbeed inay ka soo qeyb galaan xafladda saxiixa heshiiska Imaaraatka iyo Israa’iil, kaas oo martigalin doona Aqalka Cad.
CNN ayaa soo werisay in ujeedada safarka uu ku tagayo wiilka uu sodogga u yahay Trump ee gobolka ay tahay “in lagu dhawaaqo guul naadir ah oo laga gaaray siyaasada dibadda, iyo in laga caawiyo kor u qaadida fursadaha Donald Trump ee ku aaddan doorashada madaxtinimada ee la qorsheeyay November-ta soo socota.”
Imaaraatka iyo Israel ayaa dhowaan ku dhawaaqay inay caadi ka dhigayaan xiriirkooda si kaamil ah, iyada oo uu dhexdhexaadinayo Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Maalmihii la soo dhaafay, Abu Dhabi waxay qaabishay saraakiil iyo siyaasiyiin reer Israel ah, sidoo kale Amiirka dhaxalka leh Mohammed bin Zayed ayaa wuxuu wacay Rai’isul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu.
Telefishanka CNN oo soo xiganaya diblomaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan Congress-ka ayaa sheegay in wiilka uu sodogga u yahay madaxweynaha uu shukaaminayo dhowr hogaamiye oo carbeed si uu ugu riixo inay ka soo qayb galaan xaflada sixiixa, hadafkuna wuxuu qayb ka yahay ajandayaasha howlgalkisa ee gobolka.
Ilo wareedyo rasmi ah ayaa tilmaamaya in kuwa ay Khusayso ka soo qeybgalka ay yihiin hogaamiyaasha Masar, Jordan, Baxrayn iyo Cumaan. Waxay intaas ku dartay in dalalkan qaarkood ay ka baaran degayaan suurta galnimada ka qeybgalka xafladda iyo cidda matali doonta.